Sarotra takarina ve ireo maodely Wordpress? | Fifamoivoizana hiara-miasa
by on Enga anie 29, 2021
Moa WordPress Môdely sarotra azo?
Anisan'ireo zava-dehibe miseho mametraka ny olona tsy hampiasa ny rindrambaiko WordPress irery tranonkala (fa tsy WordPress nampiantrano bilaogy tranokala) no lafiny ara-teknikan'ny fomba fiasa ao anatin'izany ny fomban'ny WordPress sy ny modely famolavolana. Betsaka ny miresaka momba ny kaody, PHP, CSS ary ny fanafohezana sarotra maro hafa izay tsy midika ho be dia be amin'ny olona! Mampalahelo izany, satria ny tranokala bilaogy WordPress dia misy fiatraikany lehibe amin'ny tranokala, ary azo ampiasaina ho tranokala mitokana raha vantany vao azonao ny sehatra misy anao sy ny fampiantranoana azy.
Ny fahazoana ny fomba fiasan'ny WordPress, ny fametrahana ny rindranasa rindrambaiko, ary ny fitadiavana ny fomba fandefasana modely modely amin'ny fomba dia mila fahalalana teknolojia kely. Tsy dia henjana araka ny fisehoany voalohany izany, ary ny vaovao tsara, ho an'ireo olona izay somary ihantsy ady ara-teknika, dia misy torolàlana sy loharanom-pahalalana miavaka izay afaka manampy amin'ny fomba milamina kokoa.
Ny modely famolavolana WordPress no fototry ny fomba ampiasaina hampivelarana ireo pejin'ny bilaogy WordPress. Ny maodely famolavolana WordPress amin'ny ankapobeny dia rakitra be dia be izay miaraka mamorona ny fomba ho an'ny tranonkalanao bilaogy WordPress.
 index.php– ity no maodely famolavolana voalohany apetraka amin'ny tranokalanao WordPress
 header.php– ny maodely famolavolana lohateny
 footer.php– ny maodely famolavolana tongotra
 page.php– amin'ny famokarana pejy WordPress
 tokana.php– hamokarana lahatsoratra WordPress
 sidebar.php– ny fitetezana pejy tranokala WordPress
 style.css– ny styleheet izay misy ny endriny ho an'ny tranonkalanao WordPress.
Ireo no ifotony tsotra izao; betsaka kokoa ny maodely famolavolana WordPress azo omena mba hampifanarahana ny tranonkalanao; ohatra, rohy, karazana fikarohana, lahatsoratra arisiva ary fanamarihana tranokala WordPress.
Amin'ny ankapobeny dia sombin-kaody tsotra fotsiny izy ireo hanampiana ireo modely famolavolana WordPress hanatanterahana tsara ny asany. Ireo tagy ao anatin'ny maodelin'ny famolavolana dia misy torolàlana hahatonga ny tranonkalanao WordPress ho lasa pejy mivelatra mahay!
Anisan'ireo lafiny mampihoron-koditra amin'ny maodely famolavolana WordPress ny fahafahanao manamboatra azy ireo hamorona pejy tranokala tsy miankina ankoatran'ny pejy fandefasana. Ireo maodely famolavolana efa voafaritra dia hampiasaina amin'ny pejy rehetra ao amin'ny tranokalanao WordPress, na izany aza azonao atao ny mampiditra, manafoana na manova ireo rakitra modely endrika hafa hamokarana vokatra manokana isaky ny pejy.
Azonao atao ny manomboka manomboka tsara ny fomba fiarahan'izy ireo miasa amin'ny famokarana tranokala bilaogy WordPress raha mieritreritra ireo modely famolavolana WordPress ianao ho mekanika an'ireo fomba.
Ny iray amin'ireo zavatra toa manakana ny olona tsy hampiasa ny rindrambaiko WordPress amin'ny tranokalan'izy ireo (mifanohitra amin'ny tranokala bilaogy WordPress nampiantrano) dia ny lafiny teknika amin'ny fomba fiasa ao anatin'izany ny fomban'ny WordPress sy ny modely famolavolana. Ny modely famolavolana WordPress no fototry ny fomba ampiasaina hampivelarana ireo pejin'ny bilaogy WordPress. Ny endriny dia misy amin'ny fomba sy endriny rehetra, ary azo ampifanarahana amin'ny fanovana ny endrika, fametrahana ny plugins WordPress ary amin'ny fampidirana na fanovana ireo modely endrika Ny maodely famolavolana WordPress dia tena rakitra maro fotsiny izay miaraka mamorona ny fomba ho an'ny tranonkalanao bilaogy WordPress. Ireo tag ao anaty ny maodelin'ny famolavolana dia misy torolàlana hahatonga ny tranonkalanao WordPress ho lasa pejy voafantina mahay!